एउटा भएको रेल र रोपवे राष्ट्रको सम्पत्ति मानेर सबैले रक्षा गरिदिएको भए, शासक, शासन र छिमेकी गतिला र हितैषी भइदिएका भए आजसम्म नेपालका तराइ र पहाडभरी रेलको संन्जाल बनि सक्थ्यो भने पहाड र हिमालतिर रेल र रोपवेहरूका सयौ लाइन र स्टेशनहरू बनि सक्थे । तर, दुखको कुरा एउटा रेल र रोपवेबाट बिस्तार गरेर देशैभर रेल र रोपवे चलाउनु पर्नेमा, भएको एउटा रेल र रोपवे पनि बिस्थापित गरियो । जस्को कारण न हिमाल न पहाड न तराइ मधेशले सुविधा र सहजता पायो ।
नेपालको पानी र जवानी भारततिर गएर भारतको जमिन सिंचिने काम मात्र भयो आज सम्म भने, यता घर, परिवार, टोल र देशले सेवा, सुविधा र सुरक्षा पाउनु त कता हो कता बाबु बाजेले खनि खोस्री परिवारै धानेको जमिन बाँझो र जवानबिहिन बनि रहने स्थिती बनाइयो । गाउँ युवा शून्य बनाइयो ।
यदी भएको एउटा रेल र रोपवेको विस्तार देशैभर गरिएको भए कल्पना गरौ त, देश र जनताको बिकास र सम्वृद्धि स्विजरल्यान्ड जस्तै बनि सक्थ्यो तर बिहार सम्वृद्ध बने नेपालको तराइ, पहाड सम्वृद्ध बन्ला भन्ने डर ! तिब्बत बने नेपालको हिमाल सम्वृद्ध बन्ला भन्ने डर, अनि हाम्रो शासन र नियन्त्रण गुम्ला भन्ने डरले नेपालको बिकास र निकास दिन छिमेकी र स्वदेशी स्वार्थी शाषकहरूले कहिल्यै पनि चाहेनन् र हुन दिएनन् ।
अब पनि यसको सुरूवात नगर्ने र देशको समृद्धिको सपना नदेख्ने शाषकको शासन देशमा रहिरहने भने न देश समृद्ध बन्छ न जनता नै सुखी बन्छन् ! यतिबेला देशमा बिकास र निकास रोकिएका छन् । देशमा उत्पादन सून्य र जवान या जनशक्ति सून्यमा परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ । भएका उद्योग धन्दा बन्द हुँदा त्यसले रोजगारीमा असर पारेको छ । एउटा युवा जब सर्टिफिकेट बोकेर रोजगारीका लागि शहर बजार धाउँछ अनि निरास र शून्य उपलब्धिबिहिन भएर सर्टिफिकेट सिरानीमुनि थन्क्याएर विदेशको यात्रा थाल्ने योजना बनाउँछ । अनि त्यो युवाले आफ्नो मातृभूमि होइन, विदेशलाई केवल बाँच्ने आधार बनाउँछ ।
जब युवाले विदेश रोज्छ तब देशमा विकासका सम्भावना र आधारहरु मेटिदै जान्छन् । देश सम्हाल्नेहरुले कहिल्यै बुझ्न सकेनन् आखिर देश बनाउने नै युवा जोश जाँगरले हो भन्ने ।
यतिबेला शाषकहरुले बुझ्न जरुरी छ देश विकासका योजनाहरु रोकिनु हुन्न । यसमा जन र दल सबै सचेत र संगठित हुनुपर्दछ । सहयोगी र सहभागी बन्नु पर्छ । दबाब र सुझाब दिने बन्नु पर्छ ।
आज जंगलको कारण देखाएर निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने खेल छिमेकी देश र नेपालकै केही स्वार्थी समूहले खेलिरहेको देखिन्छ । यसबाट भारत बाहेक कुनै देशलाइ फाइदा हुने छैन । हो, रूख बाँच्न र स्वाँस फेर्न चाहिन्छ त्यो सबै प्राणीहरूको जीवन आधार र बास पनि हो । आज जंगलकै कारण अष्ट्रेलियामा लाखौ प्राणी मरिरहेछन्, सयौ घर जलिरहेका छन् र वातावरण बिग्रिएर अधिक तापक्रमबाट मानव जीवन अस्तव्यस्त बनि रहेका पनि छन् । जंगलको सहिसदुपयोग गर्न नजान्दा र स्वयम् नागरिकले पनि त्यतातिर सचेतना नजगाउँदा यस्ता दुर्घटना पनि भोगिरहनु परेको यर्थाथ सबैलाई छर्लङ्ग छ । तर पनि जंगल र रूख चाहिन्छ । जंगल फाँडेर र रूख काटेर नटै मानव जीवन आजको गाउँ र शहरमा रूपान्तरण भएको हो भन्ने पनि भुल्नु हुँदैन ।
आवस्यक रूख काटेर आवश्यक ठाउहरूमा अरु रूख रोपेर मानव जीवन चल्ने र मानव वस्ति र निर्माणहरू बन्ने र बनाइने हो । यसलाइ बिबाद बनाएर बिकास र निर्माण रोक्नु हुन्न । बरू तराइ र पहाडका नाग्गा जमिन र पहाडहरूमा रूख, फलफूल खेती, पशुपालन गरिनु पर्दछ । राज्यले अनावस्यक पहाड काटेर बस्ति र उधोग बनाउन सक्छ । हवाइ यात्रा र साधनलाइ सुरक्षित बनाउन सक्छ । पहाड र तराइ मधेशका जमिनहरूमा पोखरी र तालहरू बनाउन सक्छ ।
खोलाहरूलाइ थुनेर पानी जमाएर नहर र सुरूङ बनाएर जमिन र गाउँ शहरमा पानीको व्यवस्था गर्न सक्छ । दुइ पहाडका ठुला र फराकिला खोलाहरूमा पानी जम्मा हुने गरी साना जहाज चलाउन , माछापालन, सिंचाई र खानेपानीको लागी प्रयोग गर्न सक्छ । यसबाट जनतामा सुविधा र सहजता आउछ । यसबाट जमिन बाँझो रहने छैनन । यसबाट उत्पादन बढ्ने छन् । आयात घट्ने छ । निर्यात बढ्ने छन । महँगी र अभाव घट्ने छन । रोजगारी बढ्ने छ । जनशक्ति देश मै बस्ने छ । आखिर देश र जनले चाहेको पनि त यही हो । आखिर सपना न हो । आखिर सम्भावना न हो यथार्थतामा परिवर्तन गर्न राज्य र नागरिक एक भए मात्र सम्भव छ ।
रोकावट, चुनौती त हरेक राज्य र नागरिकले भोग्ने पक्ष नै हो । यो तोडेर नै संसार चलिरहेको छ अगाडि बढिरहेको छ । मानव जीवन बाँचिरहेको छ । सत्य र चुनौती बिना संसार र जीवन कहा सम्भव छ र !